९ वर्ष पछि राहूकेतुले यी ४ राशिलाई छोडेर जाने भएकाले मिल्नेछ सबैभन्दा ठूलो सफलता, कुन कुन हुन् ती राशी? – ताजा समाचार
ज्योतिषशास्त्रीका अनुसार हरेक व्यक्तिको जीवनमा खुशी र प्रगतीमा ग्रहको राशिमा हुने प्रभावमा निर्भर हुने बताउछन् । जसले गर्दा राहुकेतुलाई शास्त्रमा निकै महत्वकासाथ हेरिन्छ । त्यसैले ९ वर्ष पछि राहूकेतुले यी ४ राशिलाई छोडेर जादैछ । यदि तपाईको राशी परेको छ भने हेर्नुस् । मिल्नेछ जीवनकै सबैभन्दा ठुलो सफलता ।कुन कुन हुन् ती राशीहरु ?
वृश्चिक राशि यो राशी हुनेहरुको लागी पनि राहुको प्रभाव हट्ने भएकाले अति शुभ समय रहेको छ । त्यसैले यो राशीलाई मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढनेछ । परिवारमा सुख , शान्ति छाउनेछ । साथै रोकिएका कामहरु बनी आर्थिक लाभ हुनेछ ।
लिवर अर्थात् कलेजोको सम्पूर्ण फोहोर वा खराबीलाई एकपटकमै हटाउने यो गोप्य घरेलु औषधी ! लिवर यानिकी कलेजोले हाम्रो शरीरमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीले जस्तै काम गर्छ। अर्थात् तपाइँ जत्ति पनि बाहिरको जंक फुड, तेलमा तारेको भोजन, जाँड रक्सी र अनेकौं केमिकलयुक्त औषधी लगायतका पदार्थ खाएपनि यी चिजहरु बाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई कलेजोले शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। भोजन खाएपछी कलेजोले उक्त भोजनबाट आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पुर्याउँछ ।समग्रमा हेर्दा शरीरमा हुने हरेक कामको सफलता पुर्वक काम सम्पन्न गर्नको लागि कलेजोको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। तर यदि यसमा केहि गढबढ भएमा हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण प्रणाली नै खराब हुन्छ।